लेखको भाषा अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अजरबैजानी (सिरिलिक) अफ्रिकान्स अरबी अल्बेनियन आम्हारिक आर्मेनियन इटालियन इन्डोनिसियन इबान इलोको उज्बेक उज्बेक (रोमन) उम्बुन्डु एस्टोनियन ओसेसियन काजाक काजाक (अरबी) किकाओन्डे किन्यारवान्डा किरून्डी किर्गिज कोरियन क्रोएसियन क्षोसा ग्रीक चिचेवा चिटोंगा चिनियाँ क्यान्टोनिज (परम्परागत) चिनियाँ क्यान्टोनिज (सरल) चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चेक जर्जियन जर्मन जापानी जुलू टगालोग टर्कमेन टर्किश टाटार डच डेनिश तेलगु थाई नजेमा नर्वेली नेपाली पोर्चुगिज (पोर्चुगल) पोर्चुगिज (ब्राजिल) पोलिश फिनिश फ्रान्सेली बुल्गेरियन भियतनामिज मले मल्यालम मालागासी माल्टिज म्यानमार म्यासडोनियन युक्रेनियन योरूबा रूसी रोमानियन लिंगाला लिथुआनियन शोना सर्बियन (रोमन) सर्बियन (सिरिलिक) सिंहला सेत्स्वाना सेबूआनो स्पेनिश स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाहिली स्विडिस हंगेरियन हाइटियन क्रिओल हिब्रू हिलिगेनोन हौसा
तथ्य: तपाईं घर छोडेर जानुहोला तर नियमहरूले तपाईंलाई छोड्‌दैनन्‌; केही नियम त पालन गर्नै पर्छ। तपाईं कसै न कसैप्रति जबाफदेही हुनै पर्छ। जस्तै: अफिसको हाकिम, घरधनी वा सरकार। उन्‍नाइस वर्षकी ड्यान्यल भन्छिन्‌: “घरमा बस्दा नियम नमान्‍ने युवायुवतीहरू एक्लै बस्न थाल्दा नियम भनेको के रहेछ भनेर बल्ल चेत्छन्‌।”
बाइबल यसो भन्छ: ‘सरकार र अख्तियारवालाहरूको अधीनमा बस।’ (तीतस ३:१) बुबाआमाको नियम पालन गर्न सिक्दा पछि त्यसले तपाईंलाई ठूलो भइसकेपछि जीवनका अरू क्षेत्रहरूमा पनि मदत गर्छ।
तपाईं यसो गर्न सक्नुहुन्छ: नियम मान्दा हुने फाइदाबारे सोच्नुहोस्‌। जेरेमी नामका युवक भन्छन्‌: “बुबाआमाको नियमले मलाई साथीहरू छान्‍न र समयको सदुपयोग गर्न मदत गऱ्‍यो। अनि धेरै टिभी हेर्ने, भिडियो गेम खेल्ने नराम्रो बानी पनि बसेन। बरु फुर्सतको समयमा केही अर्थपूर्ण काम गर्न सकें।”
तर तपाईंलाई कुनै नियम अर्थ न बर्थको लाग्छ भने नि? ट्यामरा नामकी जवान केटी भन्छिन्‌: “बुबाआमाले मलाई एक्लै विदेश जान दिनुभयो तर घर फर्केपछि भने जम्मा २० मिनेट टाढा पर्ने सहरमा गाडी चलाएर जानसमेत दिनुभएन।”
तपाईं पनि यस्तै अवस्थामा पर्नुभएको छ होला। तर घरको नियमबारे बुबाआमासँग कुरा गर्नै हुँदैन भन्‍ने छ र? अहँ छैन। बरु नियमहरूबारे कहिले र कसरी कुरा गर्ने, त्यो चाहिं विचार गर्नुपर्छ।
कहिले कुरा गर्ने? १७ वर्षकी अम्यान्डा भन्छिन्‌: “तपाईंले आमाबुबालाई आफू जिम्मेवार व्यक्‍ति हुँ भनेर देखाउँदै गएपछि मात्र घरको नियममा छाँटकाँट गर्नेबारे उहाँहरूसँग कुरा गर्न सक्नुहुन्छ।”
दारिया नामकी केटी पनि यस कुरामा सहमत छिन्‌। तिनी भन्छिन्‌: “ममीले भनेको कुरा सधैं मान्‍ने गरेको देखेपछि मात्र उहाँले कुनै-कुनै नियम परिवर्तन गर्नुभयो।” वास्तवमा भरोसा मागेर पाइने कुरा होइन, यो हामी आफैले कमाउनुपर्छ।
बुबाआमाले बनाएको नियम नमान्‍ने घरमा बस्नु त कुनै ट्राफिक नियम नभएको एयरपोर्टमा हवइजहाज ल्याण्ड गर्नुजस्तै हो
बाइबल यसो भन्छ: “आफ्ना पिताका आज्ञाहरू पालन गर्‌, र आफ्नी आमाको अर्तीलाई नत्याग्‌।” (हितोपदेश ६:२०) बाइबलको यो सल्लाह पालन गर्नुभयो भने तपाईं भरोसायोग्य व्यक्‍ति बन्‍नुहुनेछ अनि बुबाआमासँग कुरा गर्न सजिलो लाग्नेछ।
तपाईं के गर्न सक्नुहुन्छ? बोल्नुअघि एक पटक सोच्नुहोस्‌। आवेशमा आएर कुरा गर्नुभयो भने लामो समयदेखि कमाएको भरोसा छिनभरमै समाप्त हुनेछ। त्यसैले बाइबलले यस्तो सल्लाह दिएको छ: “धीरज धारण गर्नु ठूलो समझशक्‍ति देखाउनु हो, झ्वाट्टै रीस गर्नु मूर्खताको चरम सीमा हो।”—हितोपदेश १४:२९.
सुझाव: यस लेखमा दिइएको अभ्यास पुस्तिका हेर्नुहोस्‌ र तपाईंको घरमा भएका नियमहरू केलाउनुहोस्‌। आवश्‍यक छ भने नियमहरूबारे बुबाआमासँग कुरा गर्नुहोस्‌।
“नियमहरूले अरूलाई आदर गर्न र आत्मसंयम विकास गर्न युवाहरूलाई मदत गर्छ। यस्ता गुणहरू पछिसम्म चाहिन्छ। नियम नभएको भए जीवन बिताउने तरिका थाह हुँदैन थियो अनि सही निर्णय गर्न पनि सकिंदैनथ्यो।”—१९ वर्षकी किम्बर्ले।
“बुबाआमाले बनाएको नियमहरू असाध्यै कडाजस्तो लाग्थ्यो। त्यसलाई तोड्‌न आफैलाई हानि हुने अनि बुबाआमाको भरोसा गुमाउने काम गरें। तर उहाँहरूले बनाएको नियम मेरै भलाइको लागि हो भनेर बल्ल बुझें।”—२१ वर्षकी केली।
शेयर गर्ने शेयर गर्ने घरमा पनि नियम बनाउनुपर्छ र?